Vaovao - Rafitra fanaovana boaty matevina rindrina GERISS Double, avelao ianao hanana fahaizana ambony ao an-dakozia!
Rafitra vatasarihana boaty GERISS Double rindrina, avelao ianao hanana fahaizana ambony ao an-dakozia!
Miaraka amin'ny fivoaran'ny fotoana, ny olona dia manana takiana avo sy avo kokoa ho an'ny lalimoara an-dakozia. Andiana kabinetra an-dakozia tsara, ampahany tena ilaina amin'ny fitaovana. GERISS HARDWARE dia mpanamboatra matihanina sinoa ny fitaovana enti-miasa ao an-dakozia. Androany isika dia hiresaka momba ny antony tokony hisafidiananao ny rafitry ny vatasarihana boaty.
GERISS M02 Series boaty boatin-drakaka manintona, 13mm ny hatevin'ny tontonana amin'ny vatasarihana, ataovy manana toerana fitahirizana lehibe kokoa ny vatasarihana. Ny tontonana amin'ny vatasarihana dia azonao atao ny manamboatra loko mifanaraka amin'ny loko tianao. Ny rafitry ny vatasarenantsika M02 Series, ilay vatasarihana miafina dia afaka misafidy manakaiky ianao ary manosika hanokatra asa roa. Ity vokatra ity dia multifunctional. Azonao atao ny mampiasa ny drawer undermount slide amin'ny takelaka roa amin'ny vatasarihana na vatasarihana hazo. Ity endri-javatra ity dia afaka mampihena ny tsindry amin'ny fanatobiana entana.
Ho an'ny sary mitsivalana amin'ny vatasarihana ambany dia azonao atao ny misafidy fonosana 2D na fitaovana fanidiana hidina eo aloha 3D. Fampahalalana bebe kokoa azonao atao ny mitsidika ny tranonkalantsikahttps://www.yangli-sh.com/drawer-system/ misafidy ny rafitry ny vatasarihana matevina. Raha manana fanontaniana ianao dia aza misalasala mifandray aminay.